Siinqee - Herrega Qusannaa Waadi’aa Dubartoota - Oromia International Bank
Haawwen ykn dubartoonni aadaa qusannaa isaanii akka gabbifatanii fi maallaqa qusatan irraa faayidaa addaa akka argatan kan taasisuudha.
Herrega kana banachuuf umriin hin daangessu, shamarran waggaa 18 gadiis karaa maatii isaanii banachuu ni danda’u.
Waloon ykn dhuunfaan banachuun ni danda’ama.
Herrega kana qarshii malees banuun kan danda’amu yoo ta’u, guyyaa baname irraa kaasee hanga ji’a tokkoo gidduutti qusannaan jalqabamuu qaba.
Tajaajila baankii moobaayilaa fi interneetiin fayyadamuun kan danda’amu yoo ta’u, qarshii yeroo fi hanga barbaadan baafachuun ni danda’ama.
Tajaajilli kun seera Sheriyaa giddugaleessa godhatee kan raawwatu ta’a.
Abbaan Herregichaa dhaabbata daldalaa filataman waliin POS maashiniin yeroo bittaaf gurgurtaa raawwatu gatiin bittaa addatti hir’ifamaaf.
Faayidaaleen garaagaraas ni jiraata.